Sandesh Prawahसाफ अपडेट: ७ पटक पदक बिजेता भारत र नेपालको फाइनल भिडन्त कस्ले मार्ला बाजि? - Sandesh Prawah
साफ अपडेट: ७ पटक पदक बिजेता भारत र नेपालको फाइनल भिडन्त कस्ले मार्ला बाजि?
बिहीबार २८ आश्विन, २०७८
काठमाडौ- साफ च्याम्पियनसीपको फाइनलमा नेपालको सामना भारतसँग हुने भएको छ । भारतले माल्दिभ्सलाई हराउँदै प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो । कप्तान सुनिल क्षेत्रीको दुई गोलको मद्दतले बुधबार भएको खेलमा भारत ३–१ गोलले विजयी बन्यो ।